In kasta oo digaagga digaagga ay ku sii kordhayeen caan ka ahaanshaha Afrika sannadihii la soo dhaafay, haddana waxay asal ahaan ahayd hawl yar. Si kastaba ha noqotee, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxay noqotay hawl culus, iyadoo dhalinyaro badan oo ganacsato ah ay bartilmaameedsadeen faa'iidooyinka soo jiidashada leh ee la soo bandhigay. Dadka digaagga ee ka badan 5 000 hadda waa wax iska caadi ah laakiin u guurista wax soosaarka ballaaran ayaa walaac ka muujisay dadweynaha qashin qubka habboon. Arrintaan, xiisaha leh, waxay sidoo kale bixisaa fursado qiimo leh.
Waxsoosaarka baaxadda weyn ayaa soo bandhigay caqabado badan, gaar ahaan kuwa la xiriira qashinka. Ganacsiyada yar-yar ma soo jiitaan fiiro badan maamulka deegaanka laakiin howlaha ganacsi ee la xiriira arrimaha deegaanka ayaa looga baahan yahay inay raacaan isla heerarka badbaadada deegaanka.
Arrinta xiisaha lihi waxa weeyi, caqabadda wasakhda digada ayaa siinaysa beeralayda fursad ay ku xalliyaan mushkilad weyn: helitaanka iyo qiimaha awoodda. Wadamada Afrika qaarkood, warshado badan ayaa ka cawda qiimaha qaaliga ah ee korontada qaar badan oo reer magaal ahna waxay adeegsadaan matoorro maxaa yeelay korontada laguma kalsoonaan karo. Isbeddelka digada qashinka oo loo beddelay koronto iyada oo la adeegsanayo biodigesters ayaa noqotay rajo soo jiidasho leh, beeraley badan ayaa u jeestay.
Ku-beddelka qashinka digada oo loo beddelo koronto ayaa ka badan gunno, maxaa yeelay korontadu waa badeecad ku yar dalalka Afrika qaarkood. Biodigester-ku waa fududahay in la maareeyo, kharashkuna waa macquul, gaar ahaan markaad eegto faa'iidooyinka muddada-dheer
Ka sokow soo saarista awoodda gaaska noolaha, si kastaba ha noqotee, qashinka biogas, oo ah wax soo saarka mashruuca biodigester, ayaa si toos ah u nijaasayn doona deegaanka tiro aad u badan, isku soo uruursiga sare ee ammonia nitrogen iyo walxaha dabiiciga ah, iyo kharashka gaadiidka, daaweynta iyo adeegsiga sare. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah qashinka biogas ee ka yimaada biodigester wuxuu leeyahay qiime dib u warshadeyn wanaagsan, haddaba sidee ayaan si buuxda ugu adeegsan karnaa qashinka biogas?
Jawaabtu waa bacriminta gaaska noolaha. Qashinka Biogas wuxuu leeyahay laba nooc: mid waa dareere (biogas slurry), oo qiyaastii ah 88% wadarta. Marka labaad, haraaga adag (hadhaaga biogas), oo qiyaastiisu tahay 12% wadarta guud. Ka dib marka la soo saaro qashinka biodigester, waa in la soo dejiyaa mudo ah (halsano heerka labaad ah) si adag iyo dareeraha u kala baxaan si dabiici ah.Kala adag - dareeraha dareeraha sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu kala saaro qashinka gaaska noolaha iyo kuwa haraaga ah. Biogas slurry waxaa ku jira waxyaabo nafaqo leh sida nitrogen la heli karo, fosfooraska iyo potassium, iyo sidoo kale astaamo raadraac sida zinc iyo iron. Marka la eego go'aaminta, qulqulka biogas wuxuu ka kooban yahay wadarta nitrogen 0.062% ~ 0.11%, ammonium nitrogen 200 ~ 600 mg / kg, fosfooraska la heli karo 20 ~ 90 mg / kg, laga heli karo potassium 400 ~ 1100 mg / kg. Sababtoo ah saameynteeda degdegga ah, heerka isticmaalka nafaqada sare, iyo si dhakhso leh ayey u nuugi kartaa dalagyada, waa nooc ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee si dhakhso leh u adeegsada bacriminta isku dhafan. Bacriminta haraaga biogas ee adag, cunsurrada nafaqada iyo wasakhda biogas asal ahaan waa isku mid, oo ay kujiraan 30% ~ 50% maadada dabiiciga ah, 0.8% ~ 1.5% nitrogen, 0.4% ~ 0.6% fosfooraska, 0.6% ~ 1.2% potassium, laakiin sidoo kale qani ku ah humic asiidh ka badan 11%. Aashitada Humic waxay dhiirrigelin kartaa sameynta qaab dhismeedka wadarta carrada, waxay xoojineysaa sii-haynta bacriminta ciidda iyo saameynta, waxay hagaajin kartaa astaamaha jirka iyo kiimikada carrada, saameynta isbadalka ciidda ayaa ah mid aad u muuqata. Dabeecadda bacriminta haraaga noolaha waxay la mid tahay tan guud ee bacriminta, taas oo iska leh bacriminta xilli dambe oo leh saamaynta muddada-dheer ee ugu wanaagsan.
Tiknoolajiyada wax soo saarka ee isticmaalka biogas slurry si loo sameeyo bacrimin dareere ah
Kala soocida biogas-ka waxaa lagu shubaa mashiinka taranka jeermiska si loo nadiifiyo loona khamiifiyo, ka dibna wasakhda gaaska biogas-ga ah ayaa lagu kala saaraa aaladda kala-goynta dareeraha adag. Dareeraha kala-soocida waxaa lagu shubaa aaladda isku-dhafan ee isku-dhafan iyo walxaha kale ee bacriminta kiimikada ayaa lagu daraa fal-celinta murugsan. Dareeraha isku dhafan ee dareeraha ah ayaa lagu shubay nidaamka kala soocida iyo roobabka si looga saaro wasakhda aan la daadin karin. Dareeraha kala-soocida waxaa lagu shubaa qashin-qubka asaasiga ah, iyo walxaha raadraaca ee ay u baahan yihiin dalagyada ayaa lagu daraa falcelinta daweynta. Ka dib marka falcelintu dhammaato, dareeraha chelate ayaa lagu dhex ridi doonaa taangiga la dhammaystiray si loo dhammaystiro dhalooyinka iyo baakadaha.
Tiknoolajiyada wax soo saarka iyadoo la adeegsanayo hadhaaga biogas si loo sameeyo bacrimin dabiici ah
Hadhaagii biogas ee lakala soocay ayaa lagu qasay caws, bacriminta keega iyo qalab kale oo lagu jajabiyey cabir cayiman, qoyaanka qoyaanka ayaa loo habeeyey 50% -60%, iyo saamiga C / N waxaa lagu hagaajiyay 25: 1. Bakteeriyada halsano ayaa lagu daraa walxaha isku dhafan, ka dibna maaddada waxaa laga sameeyaa iskuul compost ah, balaca tuulku kama yarayo 2 mitir, dhererkiisana kama yaraan 1 mitir, dhererku ma xadidna, iyo taangiga geedi socodka halsano aerobic sidoo kale waa la isticmaali karaa. Fiiro gaar ah u yeelo isbeddelka qoyaanka iyo heerkulka inta lagu jiro halsano si aeration ugu sii jiro raso. Marxaladda hore ee halsano, qoyaanka waa inuusan ka yarayn 40%, haddii kale ma ahan mid ku habboon koritaanka iyo taranka nafaq-wadaagga, qoyaanka waa inuusan noqon mid aad u sarreeya, taasoo saameyn ku yeelan doonta hawo qaadashada. Marka heerkulka raso u kaco ilaa 70 ℃, the mashiinka rogayaasha compost waa in loo isticmaalaa in lagu rogo raso ilaa uu gebi ahaanba ka qudhmayo.
Ka shaqeynta qoto dheer ee bacriminta dabiiciga ah
Ka dib halsano iyo bisayl maadada ka dib, waad isticmaali kartaa qalabka samaynta bacriminta dabiiciga ah farsamo qoto dheer. Marka hore, waxaa lagu baaraandegaa bacriminta dabiiciga ah ee budada ah. Kuhabka wax soo saarka ee bacriminta dabiiciga ah ee budada ah waa mid fudud. Marka hore, maaddada waa la jajabiyaa, ka dibna waxyaalaha wasakhda ah ee ku jira maaddada ayaa lagu hubiyaa iyadoo la isticmaalayo amashiinka baaritaanka, iyo ugu dambayntii baakada waa la dhammaystiri karaa. Laakiin ka shaqeyntabacriminta dabiiciga ah, geeddi-socodka waxsoosaarka dabiiciga ee granular waa mid aad u adag, maaddada ugu horreysa ee la burburiyo, shaashadda nijaasta, waxyaabaha loo yaqaan 'granulation', ka dibna qaybaha qalajinta, qaboojinta, daahan, iyo ugu dambayntii dhammaystir baakadaha. Labada geeddi-socod ee wax soo saar waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido u gaar ah, habka wax soo saarka bacriminta ee budada ah waa mid fudud, maalgashigu waa yar yahay, wuxuu ku habboon yahay warshadda bacriminta dabiiciga ee dhowaan la furay,habka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah waa dhib badan yahay, maal gashigu wuu sareeyaa, laakiin granular-ka bacriminta dabiiciga ahi ma fududa in laga faa'iideysto, dalabku waa ku haboon yahay, qiimaha dhaqaaluhuna wuu ka sareeyaa.